बंगलादेशमा रेडियो कार्यक्रम
१५ चैत्र २०७६, शनिबार १७:०२
एउटा म्यागाजिन रेडियो कार्यक्रममा बनाउन के-के सामाग्रि चाहिन्छ र कति समय लाग्छ ? आ-आफ्ना कार्यक्रमको बिषय र ढाँचा अनुसारका उत्तर आउन सक्छ । तर बंगलादेशमा बनाइने म्यागाजिन कार्यक्रमहरुको बिषय फरक-फरक हुने भएपनि ढाँचा भने एउटै खालका हुन्छन् । एउटा कार्यक्रम तयार हुनका लागि बिषयमा आधारित जानकारी, रिर्पोट, नागरिकहरुको भनाई, बिषय बिज्ञ संग गरिएको अन्तर्रवार्ता, नाटक, गित अनिवार्य समावेश गरिएको हुन्छ । महत्वपूर्ण कुरा यहाँ नाटक हो । प्रत्येक रेडियो कार्यक्रममा नाटक समाबेश हुने भएका कारण पनि कार्यक्रमहरु रोचक हुन्छन् । सामान्य भन्दा सामान्य कार्यक्रममा पनि यी बिषयहरु छुटाइएको हुँदैन । भने बिशेष कार्यक्रममा कार्यक्रमको ढाँचा अनुसारका सामाग्रिहरु थपघट गरिएका हुन्छन् ।
एउटा म्यागाजिन कार्यक्रम तयार पार्नका लागि निकै मेहनत गरिएको हुन्छ । हर तवरवाट सिंगारिएर कार्यक्रम बनाइन्छ । ति कार्यक्रमले स्रोताहरुको मन जितेका हुन्छन् । एक जना कार्यक्रम संचालकको एक हप्ताका अधिक समय एउटा म्यागाजिन कार्यक्रम बनाउनमै समय बित्छ । धेरै सामाग्रि संकलन गर्दे रोचक कार्यक्रम बनाएर रेडियोबाट प्रसारण गरिन्छ । जुन स्तरिय हुन्छ ।
सामुदायीक रेडियो समुदायले संचालन गरेको रेडियो हो । समुदायको विविध बिषयलाई समेट्दै कार्यक्रम, समाचार, जनचेतनाका सन्देश बनाइन्छ र बजाईन्छ । समुदायको समृद्धि र विकासको लागि सामुदायीक रेडियोको भुमिका महत्वपूर्ण छ । नागरिकहरुको दिनचर्या रेडियो संगै बितेका छन् । बंगलादेशमा करिव १७ वटा सामुदायीक रेडियोहरु संचालन भैरहेका छन् । र ति सामुदायीक रेडियोहरु एनजीओले समुदायका लागि संचालन गरेको पाइएको छ । यहाँको सामुदायीक रेडियोहरुको प्रमुख सामाग्रि भनेकै कार्यक्रम हो । कार्यक्रमलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिन्छ ।
सामुदायीक शिक्षा कार्यक्रम
बंगलादेशका अधिकासं सामुदायीक रेडियोमा सामुदायीक शिक्षा कार्यक्रमहरु बनाइन्छ । जसलाई अग्रेजीमा (कम्युनिटी लर्निङ प्रोग्राम) भनिन्छ । सो कार्यक्रम समुदायलाई लक्षित गरि उनिहरुको समस्या समाधानका लागि बनाइएको होे । यहाँका सामुदायीक शिक्षा कार्यक्रमको धेरै जसो बिषय स्वास्थयमा आधारित हुन्छ । स्वास्थलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम बनाइन्छ । गाँउ तथा दुर्गम ठाउँमा आउने स्वास्थ्य समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कार्यक्रमहरु बनाइएका हुन्छन् । यो कार्यक्रम बनाउनका लागि सबै भन्दा पहिले लक्षित ठाउँ, समुदाय, स्रोताको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रम संचालक छनोट स्थलमै पुगेर त्यहाँका नागरिकहरु संग उनिहरुको समस्याको बिषयमा छलफल गर्नुपर्छ । उनिहरुको समस्या र सुझाव अनुसारनै सामुदायीक शिक्षा कार्यक्रमलाई अगाडी बढाइन्छ । यसैले स्रोता र कार्यक्रम संचालकको एकदमै नजिकको सम्बन्ध बन्दछ ।
समुदायका स्रोताले दिएको बिषयमा सामुदायीक शिक्षा कार्यक्रम निर्माण गरिन्छ । स्वास्थय क्षेत्रको बिषयमा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, । सामुदायीक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने समय अवधीका सबै बिषयहरु पहिलेनै अर्थात कार्यक्रमको योजनामानै तयार गरिएका हुन्छन् । जसलाई भाग(भागमा प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रम संचालन हुने समय अवधीभर कुन–कुन बिषयको कार्यक्रम संचालन गर्ने भन्ने पहिलेनै निर्धारण गरिएको हुन्छ । कार्यक्रम संचालन भैसकेपछि भने लक्षित ठाँउ र समुदायमा पहिले देखिएका समस्या समाधान भैसकेको हुनुपर्छ । यसरी समुदायीक शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी र महत्वपूर्ण हुन्छ । समुदायको समस्या समाधानको लागि बनाइएका यी कार्यक्रमहरु साँचिकै समुदायका कार्यक्रहरु बनेका छन् । यस्ता उपलव्धीमुलक रोचक कार्यक्रमहरुलाई हामिले पनि बढावा दिन आवश्यक छ ।
‘प्रचण्डलाई उपयोग गरी नेपाललाई निचोर्ने रणनीतिमा ओली’
‘प्रतिगामी र तिनका मतियारहरुलाई नेकपामा नो इन्ट्री’
सर्वोच्चको फैसलाको सर्वत्र स्वागत, कसले के भने?
भाजपाको विश्लेषण : प्रचण्ड कम्युनिष्ट शासन तर्फ अग्रसर, ओली भारतको नजिक